एक अमेरिकी देशमा महङ्गी १२०० प्रतिशत नजिक ! भरपेट खान नपाएर मानिस भकाभक मर्दै !!
काठमाण्डौ । ६ मिस वल्र्ड, ७ मिस युनिभर्सको जन्म भएको निकै राम्रा सुन्दरीहरुको देश भेनेजुएलाको हालत दिनप्रतिदिन खराब बन्दै गइरहेको छ । यो देशमा हिजोआज एउटा अण्डाको मूल्य करिब १५ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने करिब २१ हजार रुपैयाँ प्रति लिटरमा दूध बिक्री भइरहेको छ । भेनेजुएला त्यस्तो देश हो, जसले विश्वलाई हालसम्म सबैभन्दा बढी ब्यूटी क्वीन दियो...
मेसीको खुट्टाको मूल्य ८ सय ९६ करोड रुपैयाँ !
काठमाण्डौ । कोपा अमेरिका कपमा आफ्नो देशले हार व्यहोरेपछि चर्चित फुटबलर लियोनल मेसीले फुटबल खेलबाट सन्यास लिएका छन् । आफ्नो जादूमय खेल कलाबाट विश्वलाई आफ्नो दिवाना बनाउन सक्षम मेसीको खर्च र सौख पनि शाही शैलीकै छ । मेसीले करिब ८ सय ९६ करोड रुपैयाँमा आफ्नो दुवै खुट्टाको इन्स्योरेन्स गराएका छन् । उनको साथमा विश्वमा चर्चित लक्जरी कारहरुको...
मृत्युको ५० वर्षपछि पनि भारतका पहिलो राष्ट्रपतिको बैंक खाता संचालनमा !
काठमाण्डौ । भारतका पहिला राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको मृत्यु भएको ५० वर्ष बितिसकेको छ, तर उनको नाममा पटनाको एक बैंकमा खोलिएको खाता अझै पनि संचालनमा रहेको पाइएको छ । पटनाको एक्जीविशन रोडमा रहेको पञ्जाव नेशनल बैंकको शाखामा ०३८००००१०००३०६८७ नम्बरको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको नाममा खोलिएको खाता अझै पनि संचालनमा रहेको...
बेलायत इयूबाट बाहिरिने जनादेशले विश्व अर्थतन्त्रमा उथलपुथल
काठमाण्डौ । यूरोपियन युनियन(इयू)को एक शक्ति राष्ट्र बेलायत त्यहाँबाट अलग्गिने जनमतसंग्रहको ताजा परिणामसँगै बेलायत, विश्व, छिमेकी भारत र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत असरहरु देखा पर्न थालेका छन् । जनमसंग्रहले दिएको जनादेशका कारण पाउण्ड स्टरलिङ डलर ३१ वर्षकै तल्लो स्तरमा आइपुगेको छ भने विश्वका प्रमुख सेयरबजारमा हलचल पैदा भएको छ । भारतीय...
भारतमा बैंकहरुको मेगा मर्जको तयारी, ६ ठूला बैंकमा २७ साना बैंक गाभिँदै
काठमाण्डौ । भारतमा बैंकहरुको संख्या अधिक भएको र यसले सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने भन्दै साना बैंकहरुलाई मेगा मर्जरको तयारी थालिएको छ । केन्द्र सरकारले २७ साना सरकारी बैंकहरुलाई ६ वटा ठूला बैंकमा मर्ज गर्ने तयारी थालेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै एसबीआई र उसका एशोसिएट बैंकहरुबीचको मर्जरसँगै यो...
अमेरिका जान मरिहत्ते गर्नेका लागि खबर, अमेरिकी नागरिकको दैनिक आय भारतको भन्दा कम ! न्यून आय हुन थालेपछि आत्महत्या गर्ने बढे
-एन्गस डेटन विदेशी विकास सहायता रबिन हुड सिद्धान्तमा आधारित छ, अर्थात् धनीसँग लेऊ र गरिबलाई बाँड । विकास संस्थाहरु, बहुपक्षीय संघसंस्थाहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुले आजभोलि हरेक वर्ष धनी मुलुकबाट गरिबीमा बाँचिरहेका मुलुकहरुमा १३५ अर्ब डलरभन्दा बढी प्रवाह गरिआएका छन् । रबिन हुड सिद्धान्तको अर्को अर्थ “बहुपक्षीय प्राथमिकतावाद” हो,...
चीनमा ऋण असूल्ने अनौठो तरिका, ऋणिको नाङ्गो फोटो धितोको रुपमा राख्ने चलन
काठमाण्डौ । ऋण उठाउन कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले अनेक–अनेक उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा जग्गा, सुनचाँदी, व्यवसायिक फर्म, शेयर धितो राखेर ऋण दिने चलन छ । तर चीनमा मानिसलाई दुनियाँसामु नङ्ग्याउने धम्की दिएर ऋण असूल्ने अनौठो तरिकाले निकै चर्चा पाएको छ । चीनको सरकारी मिडिया ‘चाइना डेली’ले जनाएअनुसार देशमा छ्यासछ्यास्ती खुलेका...
माइक्रोसफ्टले २६ अर्ब डलरमा लिङ्क्डइन किन्ने
काठमाण्डौ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टले प्रोफेशनल नेटवर्किङ वेबसाइट लिङ्क्डइनलाई २६ अर्ब डलरमा खरीद गर्ने भएको छ । माइक्रोसफ्टले स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि लिङ्क्डइन छुट्टै ब्राण्डको रुपमा कायम रहनेछ र सो कम्पनीको खास वर्क कल्चर र स्वतन्त्रता समेत रहनेछ । लिङ्क्डइन माइक्रोसफ्टले खरीद गरेपछि पनि यसको...
पार्क गरिएकै ठाउँबाट पार्टस् गायब हुने यी हुन् भारतका चर्चित चोर बजार ! मोवाइलदेखि कारसम्म पनि चोरीकै !!
काठमाण्डौ । भारतको मुम्बई जानुहोस् या दिल्ली वा अन्य कुनै सहर, त्यहाँ रहेका चोरबजारहरु निकै चर्चित छन् । नेपाली व्यवसायी र सर्वसाधारण समेत चोर बजारमा सामान सस्तोमा पाइने भन्दै त्यहाँ पुग्ने गर्छन । भारतमा यस्ता ठूला चोर बजार छन्, जहाँ चोरीको सामान सस्तोमा पाइन्छ । यिनीहरुले गर्ने व्यापारको भोल्यूम पनि निकै ठूलो छ । यी बजारहरुमा चोरीका...
तेल उत्पादन कटौतिमा बनेन् सहमति, पेट्रोलियमको भाउ घट्ने संकेत
काठमाण्डौ । कच्चा तेलको उत्पादनलाई कटौति गर्ने मुख्य उद्देश्यले बसेको तेल उत्पादन देशहरुको संगठन ओपेक बैठक बिनानिश्कर्ष सकिएपछि आउँदा दिनमा तेलको मूल्यमा गिरावट आउने संभावना देखिएको छ । अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा बिहीबार बसेको ओपेक सदस्य राष्ट्रहरुको बैठकमा उत्पादन कटौतिको बिषयमा कुनै सहमति नजुटेको हो । कच्चा तेल उत्पादनको...
स्वीट्जरल्याण्डले तयार गर्यो विश्वकै लामो र गहिरो सुरुङ मार्ग
काठमाण्डौ । स्वीट्जरल्याण्डमा विश्वकै सबैभन्दा लामो र गहिरो रेल सुरुङ तयार भएको छ । यो सुरुङ बनाउन मात्रै १७ वर्ष समय लागेको छ । ५७ किलोमिटर लामो यो दोहोरो सुरुङको नाम ‘गोटहार्ड’ राखिएको छ, यो सुरुङ आल्प्स पर्वतको फेदमा खोलिएको छ र यसले उत्तरी र दक्षिणी यूरोपलाई तेज गति भएको रेल सेवासँग जोड्नेछ । स्वीट्जरल्याण्डले भनेको छ कि यो...
अमेरिका विश्वकै धनी देश, दोश्रोमा चीन, भारत सातौ स्थानमा
काठमाण्डौ । वल्र्ड बैंकले हालै विश्वका १० धनी देशहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । यो सूचिको पहिलो नम्बरमा अमेरिका छ भने १० औं नम्बरमा अष्ट्रेलिया । हाम्रा दुईतर्फका छिमेकी देश भारत र चीन समेत विश्वका १० धनी देशमै पर्न सफल भएका छन् । रिपोर्ट अनुसार ४८ हजार ७ सय अर्ब डलरको कुल सम्पत्तिसहित संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो नम्बरमा परेको छ...
सन् २०१६ मा पहिलोपटक कच्चा तेलको भाउ ५० डलर नाघ्यो
काठमाण्डौ । सन् २०१६ मा पहिलोपटक बिहीबार कच्चा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल ५० डलर नाघेको छ । आपूर्तिमा भएको कमी र विश्वको मागमा भएको बढोत्तरीसँगै विश्वको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेतको रुपमा यसलाई हेरिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । बिहीबार ब्रेट कच्चा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल ५०.२२ डलरसम्म पुगेको छ । गएको नोभेम्बरपछि कच्चा तेलको मूल्य...
यी हुन् बेरोजगारले पनि मासिक लाखौं रकम पाउने विश्वका केही देश
काठमाण्डौ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीको समस्याले नेपालीहरुलाई रुवाउनसम्म रुवाएको छ, भलै यहाँका शासकहरु यस बिषयमा गम्भीर नभएका हुन् । कहिलेकाही क्रान्तिकारी नेताहरुले हाम्रो देशमा पनि बेरोजगारीहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने गफ दिन्छन्, तर यस्तो गफ नीति बनेर कहिल्यै कार्यान्वयन भएको छैन र हुने छाँट पनि छैन । नेपालमा जेष्ठ नागरिक,...
गुगलमाथि १.८ अर्ब कर छलीको आरोप, फ्रान्स मुख्यालयमा कर अधिकारीको रेड
पेरिस । फ्रान्सको गुगल हेडक्वार्टरमा करोडौं कर छलीको आरोपमा छापामारी भएको छ । करिब १ सय कर अधिकृतहरुको टोलीले सेन्ट्रल पेरिसस्थित गुगलको अफिसमा रेड हानेको हो । आफ्नो अफिसमा कर अधिकृतहरुले रेड हानेपछि गुगलका अधिकारीहरुले भने आफूहरु फ्रान्सको कानून पालना गर्ने र अधिकारीहरुलाई यो जाँचमा पूरा सहयोग गरिरहेको बताएका छन् । उनीहरुले भनेका...